Football Khabar » ठूला खेलका मुखमा रामोस घाइते हुँदा रियल मड्रिडलाई ‘तनाव’ !
ठूला खेलका मुखमा रामोस घाइते हुँदा रियल मड्रिडलाई ‘तनाव’ !
स्पेन तथा क्लब रियल मड्रिडका प्रमुख डिफेन्डर सर्जियो रामोस घाइते भएका छन् । कप्तानसमेत रहेका टोलीको रक्षापंक्ति सम्हाल्ने प्रमुख कमान्डर घाइते भएपछि क्लब रियल मड्रिड र प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानलाई समस्या बढेको छ ।
गत राति युइएफए नेसन्स लिगअन्तर्गत घरेलु मैदानमा जर्मनीविरुद्धको खेल दौरान रामोसले चोट बोकेका हुन् । स्पेनले आफ्नो भूमिमा पाहुना टोली जर्मनीलाई ६–० को लज्जास्पद हार चखाएको थियो । चोट बोकेपछि रामोसालई खेलको ४३औं मिनेटमा सब्सिच्युट गरिएको थियो । उनको स्थानमा इरिक गार्सियालाई मैदान छिराइएको थियो । त्यसअघि १२औं मिनेटमा सर्जियो क्याल्सेन पनि घाइते भएर मैदान छाडेका थिए ।
खेलपछि मिडियासँग प्रतिक्रिया दिँदै स्पेनका प्रशिक्षक लुइस इनरिकेले रामोसको चोट गम्भीर नरहेको बताएका थिए । ‘रामोसले आजको खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरे । तर, दुर्भाग्यवश उनले चोट बोके । हार्मस्ट्रिङ समस्याका कारण उनले मैदान छाडेका हुन् । मलाई लाग्छ, उनले धेरै लामो समय मैदानबाहिर बस्नुपर्ने छैन,’ इनरिकेले थपे ।
रामोस घाइते भएपछि रियललाई समस्या बढेको छ । यसअघि नै अर्का डिफेन्डर राफाएल भाराने चोटसँग जुधिरहेका छन् । त्यसमा प्रमुख डिफेन्डर रामोसले पनि चोट बोकेपछि जिदानलाई आगामी खेललाई लिएर तनाव बढेको हो । रियलले आगामी खेल शनिबार ला लिगामा भिल्लारियलसँग खेल्नेछ । त्यसपछिको खेल च्याम्पियन्स लिगमा नोभेम्बर २५ तारिखमा इटालियन क्लब इन्टर मिलानसँग खेल्ने तालिका छ ।
रामोसले यी दुवै खेल गुमाउने करिब पक्का छ । स्पेनिस टोलीबाट क्लब रियल फर्किएपछि रामोसको मेडिकल जाँच हुनेछ । अनि मात्रै उनको चोटको अवस्था कस्तो छ र उनी कति समय मैदानबाहिर रहन्छन् भन्ने कुराको टुंगो लाग्नेछ । हार्मस्ट्रिङ चोटको सामान्य अवस्थामा पनि खेलाडीलाई पूर्ण रूपमा ठीक हुन महिना दिनसम्म लाग्न सक्छ । त्यो अवस्थामा रामोसले ला लिगाका दुई र च्याम्पियन्स लिगमा एक गरी कम्तीमा तीन खेल गुमाउनेछन् ।
प्रकाशित मिति ३ मंसिर २०७७, बुधबार १९:४३